4GB RAM နဲ့ထွက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ Xiaomi Redmi 5! – AsiaApps
Xiaomi အနေနဲ့ Redmi5ကို4GB RAM နဲ့ model အသစ်ထုတ်လုပ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ Redmi5ဟာပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ ဒီဇင်ဘာလကမှထွက်ရှိထားတဲ့ Smartphone ပါ။ စတင်ထွက်ရှိလာတာကတော့ RAM3GB, Storage 32 GB နဲ့ RAM2GB, Storage 16 GB တို့နဲ့ထွက်ရှိလာတာပါ။ OS ကတော့ Android 7.1.2 (Nougat) ဖြစ်ပါတယ်။ Redmi5ကိုတော့ တရုတ် online store ကနေတဆင့်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ နေရာဒေသတွေအကုန်လုံးမှာ မရရှိနိုင်သေးပေမယ့် ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရောင်းချနေတာကတော့ ဒီဇင်ဘာ ကတည်းကပါ။
RAM4GB model ရဲ့စျေးကတော့အရင်က model တွေထက် $30 ကျော်လောက်များနေမှာပါ။ RAM3GB (သို့)2GB နဲ့ run ရတာအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်တော့4GB ကတော့သင့်အတွက်ပါပဲ။ 1 GB အပိုကို $30 ကျော်ထပ်ပေးရမယ်လိုဆိုလိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
You can have the Redmi5with 4GB of RAM in black, gold, or blue. Every spec aside from the memory capacity is identical to the other models, so you still get the same 5.7″ 1,440×720 18:9 touchscreen, Snapdragon 450 SoC, 12 MP main camera,5MP selfie snapper, and 3,300 mAh battery, along with MIUI 9.1 plastered atop Android 7.1.2 Nougat
Redmi5ရဲ့ RAM4GB model ကတော့ ရွှေရောင်၊ အမည်းရောင် နဲ့ အပြာရောင် ဆိုပြီးအရောင် သုံးရောင်ထွက်ရှိမှာပါ။4GB model မှာတော့ RAM ကလွဲလို့တခြားထူးထူးခြားခြား မြှင့်တင်ထားတာမရှိဘူး။ CPU, Resolution, OS, Size, ဘက်ထရီသိုလှောင်မှု, ကင်မရာအပိုင်း အစရှိတာတွေက အရင် Redmi5model တွေနဲ့အကုန်အတူတူပါပဲ။
Redmi5model အသစ်ရဲ့သတင်းဟာမှန်ကန်နေရင်တော့ model အသစ်က စျေးနဲ့ RAM မှတပါး ထူးထူးခြားခြားကြီးမဟုတ်ဘူးလို့ပဲဆိုရမှာပါ။
1 extra GB = 30$ :’D
Xiaomi Redmi5with 4GB of RAM now available: Ever since it was unveiled in December, the Xiaomi Redmi5has been available to purchase in China with either 2GB of RAM and 16GB of storage, or 3GB of RAM and 32GB of storage. Perhaps responding to market… https://t.co/OX1o0c9OFn pic.twitter.com/tEOLTQEuzj
— AfricaNewsPress (@AfricaNewsPress) January 26, 2018